Ekpere nye San Marcos de León ka ọ bịa. ? + Dị ike!
Ekpere San Marcos de León bia Ọ na-arụ ọrụ nke ukwuu.
Cheta nke ahụ ụwa Ime mmụọ dị adị karịa ka anyị nwere ike iche n'echiche, ma na-alụ ọgụ na ya, anyị chọkwara ngwaọrụ nke mmụọ nke na-eme ka anyị nweta mmeri ma ọ bụ ọrụ ebube ahụ anyị chọrọ nke ukwuu.
Agbamume ume niile a na-eme n’ime gburugburu ebe a na-ekpechara ekpere nwere ike ị na-ahụkarị na nke ahụ dịkwa nnukwu mkpa ebe ọ bụ na ijigide ụlọ zuru oke na-enyere aka mee ka ihe dịrị n’udo ma na-eme mkpọtụ na gburugburu ụlọ anyị.
1 Ekpere Saint Mark nke Leon, bia b abia Gini bu ekpere maka ya?
2 Ekpere San Marcos de León nke na-abia
2.1 Mgbakwunye ekpere ...
3 Ekpere a, ọ dị ike?
Ekpere Saint Mark nke Leon, bia b abia Gini bu ekpere maka ya?
Mba enwere ekpere na-achọ ọdịmma onwe nanị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ dị ha.
Askjụ onye a anaghị ahapụ anyị pụọ ma ọlị ma ọ bụ nke ahụ, n'agbanyeghị ebe ọ nọ, ọ bịaghachiri ọzọ dịka nwa atụrụ dị nwayọ bụ ịtụkwasị San Sancos de León obi. ga-etinye ọchịchọ ahụ n’obi onye a pụrụ iche bia lee anyi anya ngwa ngwa.
Ọ dị mkpa ịkọwapụta na ọ bụghị naanị maka ekpere ka e mere maka ikpe metụtara ịhụnanya n'ihi na anyị nwere ike ikwu maka otu enyị ma ọ bụ onye ikwu furu efu ma ọ bụ onye hapụrụ anyị n'enweghị ihe doro anya.
Oh Saint Mark nke Leon
Gị onye kachasị anụ ọhịa niile
Ọdụm na agwọ, na ihe ọ bụla gafere ụzọ gị
A na m arịọ gị ka iwepu ma zoo obi nke (aha onye) ibia n’ukwu m
Ya bia, ya bia, n’enweghi ihe obula ma obu onye obula na-egbochi ya
Ka o gba oso, gba oso n’enweghi onye nyere ya aka
M na-arịọ ka ụzọ gị dị mkpirikpi, ka ogologo gị too
Nke ahụ na-abịa n'ihu m na mmụọ ya kpudo
Dị ka obere nwa atụrụ, ma gbaa m ụkwụ.
Ka ọ ghara ihi ụra, ka ọ ghara iri nri, ka o wee nwee obi nkoropụ n'ihi m.
Oh San Marcos de León, nye m ihu ọma a.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ike karịa, ị kwesịrị ikpe ekpere nke ike ọchịchị mgbe nke St nke Leon nke Bịa Bịa.
Ebe ndị ọzọ na-achọ imezu ebumnuche ha site na iji aghụghọ ma ọ bụ aghụghọ wayo, enwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị kwere ekwe ka dabere n'okwukwe Ndị Kraịst ma na-atụkwasị obi n'ike nke ekpere.
Na agbanyeghị ọ bụrụ iji dọta enyi, onye ọrụ, onye isi, agbataobi, onye ezinaụlọ ma ọ bụ mmekọ, ahịrịokwu a dịkwa ike n'ọnọdụ ọ bụla ejiri ya.
Mgbakwunye ekpere ...
Ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ike kachasị, ị ga-ekpe ekpere nke ngalaba.
Onye ozo aghaghi ikpeekpere. N'ụzọ dị otu a, be ga-enwe ike ịnwe ike karịa n’ekpere.
Jiri okwukwe siri ike kpee ekpere na njedebe ọkụ 3 kandụl uhie. Kandụl ndị ahụ bụ ịkele San Marcos de León.
N’aha Chineke ka m kpọkuru gị, mmụọ nke ike ọchịchị
Mmụọ nke St Cyprian, na nkụda mmụọ
Don Juan nke okporo ụzọ, mmụọ nke Juan miner
Nke n'okporo ụzọ, okporo ụzọ, na ebe, mmụọ nke ifufe anọ
Mmụọ nke Saint Mark nke Leon
Anam ekpesiri ekpere a ka san marcos de león bia abia
Ekwere m gị nkwa inyere m aka ịghọta ikike ise ahụ
Echiche, ikpe ahụ, na uche nke (aha onye)
Na enweghị m ike iri nri ma ọ bụ ihi ụra, nke na enweghị m ike ị drinkụ mmiri ma ọ bụ ije ije
Ka echiche gị tinye naanị n’ime m
Ruo mgbe ụkwụ m ga-akwụsị
Mee ya ka ọ chegharịa ma nwee obi umeala
Jiri m nsọpụrụ sọpụrụ m
M na-ahụ gị 2, mụ na gị atọ kere gị, ọbara m na-a drinkụ ya na obi m na-enye gị
Anya m kpuchiri gị anya, m bu uche gi
Ka o si dịrị, ka ọ dịrị, amen
Ekpere a, ọ dị ike?
Ekpere dị ike n’ụzọ dị ukwuu ma ọ bụrụ na ejiri okwukwe mee ya.
N’ime akwụkwọ nsọ Chineke na-akuziri anyị na anyị nwere ike ịrịọ ya n’aha nwa ya Jizọs Kraịst na ọ ga-emere anyị ihe anyị chọrọ.
Onweghi ihe n ’uwa anyi enweghi ike imezu ya site na ekpere si na San Marcos de León nke n’abia.